WAALI: Xidhiidhka Kubadda Cagta Spain Oo Shaqada Ka Eryey Tababare Lopetegui Maalin Ka Hor Bilowga Koobka Adduunka – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeAfricaWararka Somaliga AhWAALI: Xidhiidhka Kubadda Cagta Spain Oo Shaqada Ka Eryey Tababare Lopetegui Maalin Ka Hor Bilowga Koobka Adduunka
WAALI: Xidhiidhka Kubadda Cagta Spain Oo Shaqada Ka Eryey Tababare Lopetegui Maalin Ka Hor Bilowga Koobka Adduunka
13/06/2018 Abdiwahab Ahmed
Xidhiidhka Kubadda Cagta ee Spain ayaa ku dhawaaqay in shaqada uu ka eryay tababare Julen Lopetegui, kahor hal maalin inta uusan bilaaban koobka aduunka 2018.
Tababaraha Spain ayaa shalay loo magacaabay macallinka cusub ee Real Madrid la wareegi doona marka uu Koobka Adduunku dhamaado, hase yeeshee, waxa markiiba ay dhalleecayn kasoo yeedhay bahda kubadda cagta ee Spain oo ku dhaliilay tababaraha wakhtiga uu warka Real Madrid yimid oo aan munaasib ahayn iyadoo Koobka Adduunku uu bilaabmayo, taas oo dhibaato ka dhexdhalin karta xulka qaranka oo ka kooban kooxo si adag iskaga soo horjeeda.
Xulka qaranka Spain ayaa ciyaartiisa koowaad ee Koobka Adduunka maalinta Jimcaha la ciyaari doona waddanka Portugal, taas oo marka shaqo ka caydhintan la eego u muuqanaysa arrin waalli ah.
War-saxaafadeed uu xidhiidhka kubadda cagta Spain soo saaray ayaa waxa uu si rasmi ah ugu shaaciyey in tababare Lopetegui ay ka caydhiyeen shaqadii wakhti aad u adag.
“Waxa aanu ku khasbanaanay in aano ahaano bilaa Lopetegui” Sidaas waxa yidhi madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Spain, Rubiales oo isagoo jooga magaalada Krasnodar la hadlay warbaahinta.
“Waxa aanu ku jirnaa xaalad aad u adag. Ciyaartoyga waan la hadlay, waxaanan damaanad qaadayaa inay wax walba oo karaankooda ah u samayn doonaan tababaraha cusub iyo shaqaalaha.” Sidaas ayuu yidhi madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Spain.
Rubiales waxa uu ku eedeeyey tababaraha uu shaqada ka caydhiyey wakhtiga xaasaasiga ah, in wakhti aan munaasib ahayn uu sameeyey wax khaldan oo aan lasii daawan karin, waxaanu yidhi: “Ma dareemayo inuu na khiyaamay, sababtoo ah Julen shaqo fiican ayuu qabtay, laakiin waxa aanu ku khasbanaanay inaanu sidan u dhaqaaqno waayo siday wax noqdeen.
“Waa xirfadle, laakiin sax may ahayn (shaqadiisa Real Madrid) mana sii eegan karno.”
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Spain waxa uu tibaaxay inuu joogay magaalada Moscow markii uu helay warka ah in Lopetegui loo magacaabay tababaraha Real Madrid, halka uu ka maqlayna ay ahayd warbaahinta oo kalita, waxaanu yidhi: “Moscow ayaan uga imid sababtoo ah waa arrin muhiim ah oo ay tahay inaanu ka falcelino. Warbaahinta ayaan ka arkay waana wax mar hore dhacay, masuuliyadda i saaranna waxa aan ogahay in wax kasta oo aan sameeyo ay dhalleecayn iman doonto.”
Waxa kale oo uu madaxweynuhu canaanta Real Madrid oo uu tibaaxay inay ahayd in aanay wakhtigan sidaas yeelin.
Lopetegui ayaa loo magacaabay tababaraha Spain sannadkii 2016 isaga oo xilka kala wareegay Vicente del Bosque oo shaqada ka fadhiistay. Intii uu Spain watay, waxay ciyaareen 20 kulan oo 14 ka mid ah ay guuleysteen, lixda kalena barbar ay ku dhamaysten.